Daawo: Bandhiga Buugaagta oo Garowe lagu qabtay
GAROWE, Puntland- Bandhigii Afraad ee Carwada Buugaagta Garowe ayaa 16 July 2018 lagu qabtay caasimadda Puntland, waxaana kasoo qayb galay madax katirsan dowladda iyo qaybaha kala duwan ee shacabka.
Carwadan oo socon doonta 4 cisho ayaa lagu soo bandhigay in kabadan 400 oo munaadood, ku dhawaad 70 cashar iyo soo jeedino ay samaynayaan ku dhawaad boqol Qoraa oo ka kala yimid dalka iyo dibadda.
Barnaamijkan oo ay iska kaashanayaan qabashadiisa shirkadaha SCANSOM iyo SIDRA, ayaa furitaankiisa waxaa lagu sheegay in sannadkan uu ka duwanyahay kuwii kale maadama ay joogaan wajiyo ku cusub bandhigay iyo qorshayaal kale oo loo soo kordhiyay dadweynaha.
Maxamed Xasan iyo Guuleed Saalax oo ahaa qaban qaabiyaasha Bandhiga ayaa warbaahinta u sheegay in qorshahan uu yahay mid kor loogu qaadayo dhigaalka iyo dhaqanka Soomaaliyeed.
Sidoo kale qaar kamid ah qorayaasha lagu casuumay bandhigan oo uu kamid yahay Wasiirkii hore ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha dowladda Federaalka Cabdi Farax Siciid Juxa ayaa bulshada ugu baaqay inay laga qayb qaato hormarinta qoraalka iyo Akhriska.
Mudada uu socdo Bandhigan ayaa la filayaa in la is weydaarso macluumaad kala duwan.
Kulamo la doonayo in lagu ansixiyo Xukuumadda PL oo ka socda Garowe
Puntland 13.02.2019. 15:00
Xukuumadda cusub ee Madaxweyne Deni ayaa lagu soo waramayaa in maalinta berri ah...
Guddiga doorashada Gollaha Wakiilada Puntland oo la magcaabay [Akhri magacyadda]
Puntland 02.01.2019. 11:53
Puntland: Guddoomiyihii gobolka Nugal oo xilka laga qaaday
Puntland 24.09.2018. 14:26
Arday raadinaysa Nabadda magaalada Galkacyo
Puntland 02.10.2017. 14:17